“Uma qalmo inuu noqdo hogaamiye” _ Diego Maradona oo dabka kusii shiday Lionel Messi – Gool FM
(Argantina) 13 Okt 2018. Halyeeyga reer Argentina ee Diego Maradona ayaa ku eedeeyay laacibka ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee kooxda Barcelona Lionel Messi inuusan laheyn shaqsiyada dhanka hogaaminta, inkastoo tayadiisa ay tahay mid aad u sareysa.
Maradona ayaa ka hadlay Messi wuxuuna sheegay inay ka maqan tahay tayada hoggaamiyaha, sababa la xiriira inuu walwal xoogan dareemayo kahor kulan kasta.
“Kahor inta aanan ka hadlin saaxiibadiis, waxaa muhiim ah in Messi uu ka soo baxaa doorkiisa ka ciyaaryahan xulka qaranka Argantina, way adag tahay inaan sidaas iraahdo”.
“Laakiin xaqiiqada ayaa ah inaysan wanaagsaneen in kabtan uu kuu noqdo ciyaaryahan 20 jeer suuli galaya kahor ciyaarta, sababa la xiriira walwal iyo cabsi uu dareemayo”.
“Messi waa Messi marka uu ku sugan yahay kooxda Barcelona, laakiin dhinaca kale Messi waa ciyaaryahan oo kaliya marka uu matalayo xulka qaranka Argantina”.
Si kastaba Diego Maradona ayaa wuxuu hadalkiisan kula jeedaa in doorka Messi ee xulka qaranka Argantina uu kusoo gaabiyay kaliya inuu yahay ciyaaryahan, balse uu ku fashilmay doorkiisa hogaamineed, sababa la xiriira shaqsiyadiisa, iyo walwalka xoogan uu dareemayo kahor kulamada waaweyn.
Koox ka dhisan Ingiriiska oo iska diiday saxiixa Samir Nasri